5 Sirqarinta Kordhinta Taraafikada Baadhitaanka Kumbuyuutarka
Abuuritaanka maqaallo viral ah ayaa ah mudnaanta koowaad ee dhammaan dadka soo bandhigay blog. Dhab ahaan,waxay u baahan tahay ficillada joogtada ah ee fekerka ah, kuwaas oo had iyo goor wada jira. Laga soo bilaabo abuuritaanka tayadaWaxyaabaha ay ka kooban tahay horumarinta istaraatejiyadda warbaahinta saxda ah, talaabo kasta waa mid aan lagama maarmaan ahayn. Ivan Konovalov,Maamulaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijital ah waxay wadaagaan talooyin waxtar leh oo ku saabsan sida loo kordhiyo taraafikada barta.
1. Samee Muuqaal Viral ah
Qor qoraalo xiiso leh oo soo jiidanaya dareenka akhristayaasha. Magaca maqaalkaagawaa arrinka ugu muhiimsan marka la qoro faahfaahinta faayraska. Ku soo dhawow jumlado jilicsan oo soo bixi doonasoo jiidashada dareenka martida internetka. Haddii mulkiilahaagu uu ku jiro, markaa waxaad badineysaawaxay u badan tahay inay kuugu kacaan ugu badnaan hits-kaaga. Ka sokow abuurista koobab wanaagsan, qor maqaallo badan oo wargalin ah.Fadlan faahfaahinta mawduucaaga kuna sharax dhibcahaaga hab xiisa leh. Faahfaahin dheeraad ahboostada ayaa ku martiqaadi doonta martidaada martida si ay u akhristaan ​​qoraalka oo dhan. Gali sawirrada wanaagsan ee muuqaalkaaga ahboosto si aad ugu caawiso akhristayaasha fahamsan qoraalkaaga si cad. Sidaa darteed, akhristayaashaada ayaabooqo bartaada mar kale si aad u akhrido maqaalkaaga soo socda.
2. La wadaag Qodobkaaga Inta ka Horeeysa
Haddii aad rabto in aad kor u qaado taraafikada blogka, waxaad u baahan tahay in aad beegsato dad badan oo soo booqda. Qaar ka mid ah akhriyeyaasha akhriskainternetka inta lagu jiro maalinta iyo dadka kale habeenkii. Kordhinta taraafikada blogka adiga oo wadaagayamaqaalkaaga dhowr jeer mudo maalin ama bil ah. Nidaamka warbaahinta bulshada ee ugu muhiimsan ee caawin karaSi aad tan u qabato waa Facebook, Twitter, Pinterest, iyo Google+. Ku biir kooxo iyo bulshooyinkuwaas oo ku xiran warshadahaaga iyo la wadaagida quudkaaga..
3. Ku rakib Mawduuca Xaqa ah
Waxaa jira kumanaan mawduuc oo suuqa ah. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah iyaga kuma koobnablog. Tani waxay ka dhigan tahay inaad si habboon u xulato oo aad u rakibtid mid sax ah. Mawduuc wanaagsan waa in uu si buuxda u noqdojawaabta, taas oo hubin doonta in boogtaada ay ka heli karto qalab kala duwan oo ay ku jiraan miisaskaiyo bandhigyo mobile. Waa inaad sidoo kale doorataa mawduuc dhaqso ah. Marka mawduucaagu si dhakhso ah u rarayo,waxay ka dhigeysaa martida inay kudhowaan blog-kaaga kuna akhri qoraallo kale. Intaas waxaa dheer, dooro mawduuc lehqurxinta quruxda badan iyo quruxda badan.
4. Isugeyn Daabac Khariidad
badhanka wadaaggu wuxuu kaa caawinayaa inaad kobciso awoodda warbaahinta bulshada si loo gaaro dhagaystayaal balaaran.Akhristayaashu had iyo jeer waxay diyaar u yihiin inay la wadaagaan boostar xiiso leh. Sidaa daraadeed, badhanka badhanka ku dar boostadasi aad u oggolaato in aad udheeraato fayraska. Tani macnaheedu waa akhristayaashaada waxay awoodi doonaan inay la wadaagaan boggagaaga blog-kaasxaabtooda iyo taageerayaashooda. Sida natiijada wadaagaan, blogkaagu wuxuu heli doonaa gaadiid dheeraad ah.
5. Faallo ka bixiso Boggaga kale
Faallooyinka waxay noqdeen qalab awood badan, oo kaa caawinaya dib u helidda iyo gaadiidka. Fiiriblogs caan ah oo faallo ka bixiya mowduucyada iyo mawduucyada. Faallooyin macno leh ayaa soo jiidan doona dareenka,oo ay u badan tahay, waxaad heli doontaa jawaabaha ku siinaya backlinks. Faallooyinka ayaa ku dhisi doona sidii akhabiir iyo kaa caawinaya in aad soo jiidato badanaa gaadiidka aad blog.
khabiir sir ah Ivan Konovalov ayaa caddaynaya in fulinta joogtada ah ee istiraatiijiyooyinka kor lagu soo sheegaysi loo kordhiyo taraafikadaada blog. Cilmi-falka noocan oo kale ah ayaa si guul leh loo ansixiyey macaamiisheenna waxaana la xaqiijiyaywaxtarkeeda Source . Laga bilaabo hadda, waxaad isticmaali kartaa talooyinkan iyo sidoo kale adeegyo xirfadeed Sare si aad u qaadatid blog-gaaga heerka ku xiga